खुल्लामन्च: साइबाबा : आस्था, विश्वाश वा रहर ?
जीवन उपयोगी यथार्थ दर्शन बाड्ने जो कोहि व्यक्ति मलाइ आदरणीय लाग्छ र ती कुराले पक्कै पनि हाम्रो जीवनशैलीमा कुनै न कुनै रुपले भिन्नता ल्याउछ तर सबै जे हुन्छ त्यो भगवान ले गरिदिया'जस्तो यो पनि साइबाबा ले गर्दा , त्यो पनि साइबाबा ले गर्दा भन्ने कुरामा चाही - म सहमत छुइन !
तर "बैज्ञानिक युगमा एउटा ब्यक्तिमाथिको आस्था त 'रुढिबादी' ठहरिएला" भन्ने कुरा अलिक होइन कि ? बैज्ञानिक युगमा चाही आदर्श व्यक्ति हुनै सक्दैन भन्ने छैन नि ! तर पक्कै पनि अन्ध भक्त भएर यो भयो उनकै कारणले / यो भएन उन्कै कारणले भन्ने जस्ता आसक्ति चाही रुढिबादी कुरा हो !गोकुल दाइ !
दिनानुदिन साइ भक्तहरुको संख्यामा वृद्धि भएको देखिरछु मैले पनि। यो सच्चा मानव प्रतिको सदभाव त पक्कै हो तर चमत्कारका कुरामा मलाई बिस्वास छैन। कसैमाथि आस्थावान त पक्कै हुनुपर्छ जीवनको गतिलाई सहि मार्गमा डोरयाउन। यो पनि त्सैको उपज होला ।
साइबाबाका सामजिक कार्य र उनको वा उनको संस्थाका नामबाट हुने सहयोगी कार्यको त सराहना गर्नैपर्छ । तर मलाइ यो बिनासित्ती फोटोबाट विभूति झर्ने र चमत्कारका कुरा भने चित्त बुझ्दैनन् । सामान्य कुरा हो कतै फोटोबाट विभूति झर्छ भने अर्को कुनै ठाउँमा त्यो विभूति बनाइन्छ नै । अस्तित्वमै नभएको कुनै कुरा बनाउनुलाई मात्रै म चमत्कार ठान्छु, हैन भने यो साधारण चटक गर्न सक्ने मानिस भारतमा मात्रै लाखौंको संख्यामा छन ।
मलाई यहाँनेर अर्को एउटा प्रसंग याद आयो । धेरै वर्ष पहिले, जुन बेला साइबाबाले आफूलाई शिवको अवतार भएको दावा गरेका थिए, भारतकै अर्का एकजना हठयोगी एल.एस. राव ले साइबाबालाई आफूले ल्याएको कोब्रा सर्पको विष पिउन चुनौती दिएका थिए। तर साइबाबाले स्विकारेनन् । कालकूट विष पिउनेको अवतार भएको भए कोब्राको बिष पिउन समस्या नहुनु पर्ने हो ।
अरु साथीहरुलाई चित्त नबुझ्ला तर मेरो आफ्नो विचारको कुरा गर्ने हो भने चाहीँ चमत्कारको पछि लाग्नेलाई लाई काम लागे पनि साँच्चै सत्य, अध्यात्म वा ईश्वरको खोजी गर्नेकालागी भने साइबाबा काम लाग्दैनन् ।
D DUS JI said...
फ्रेमबाट बिभुती कसरी झर्छ र झर्यो अरे भन्ने कुरा मैले पनी धेरै सुनेको छु तर देखेको छैन,
साथै साइबाबाको कुरा गर्दा भारतमा दुइ जाना साइ साइबाबाहरू भेटीनु हुन्छ , स्रिद्दी साइ र साइराम, सबका मालीक एैक , भुका मानीसलाइ खाना खुवाउ, अरूको बारेमा नराम्रो नसोच ..... सन्देस फैलाउनु भएका स्रिद्दी साइ , जब स्रिद्दी गइयो त्यहाँ देखीयो मानीसहरू को आस्था, विश्वाश ,
रे का सबै कुरा पक्कै पनि सत्य हैनन्, तर प्रेम, धर्म, दया र मानव सेवाको भाव वा अनुशासित जीवनशैली उनका भक्तहरुले मात्र हैन सबैले अनुशरण गर्नु पर्ने सकारात्मक बिषयहरु हुन् र त्यसको हामीले प्रसंशा गर्नु पर्छ । मानिसमा सत्य साइ प्रति बढ्दै गएको आस्थाको कारण यही हो ।